i-azetidines Abakhiqizi be-cdmo be-apicmo biochemical
Imikhiqizo > Azetidines
Azetidine iyinhlanganisela ye-heterocyclic organic egcwele i-athomu amathathu ne-athomu eyodwa ye-nitrogen. Kuyinto uketshezi ekamelweni lokushisa elinomsindo oqinile we-ammonia futhi liyisisekelo esiqhathaniswa nokuqhathaniswa nama-amines amaningi ase-secondary.
I-Azubadine kanye neziqhamo zayo ziyizinhlobo ezingavamile zokwakhiwa kwemikhiqizo yemvelo. Ngokuphawulekayo, ziyingxenye eyinhloko yama-acine agineic kanye ne-penaresidins. Mhlawumbe i-azetidine eningi kakhulu equkethe umkhiqizo wemvelo i-azetidine-2-carboxylic acid, i-homolog non-proteinogenic ye-proline.
I-N-Boc-azetidine-3-carboxylic acid (i-142253-55-2)